Ogwe Ihe dị nkenke anyị bụ ịnye na ịwụnye ọtụtụ ogwe ndị a kpuchiri Acoustic nwere nha, akụkụ na ụdị dị iche iche. Ihe ngosiputa ndi mbu bidoro mgbanwe n’ime ma hazie ya na ụzọ a ga-esi wụnye ma na-egbochi ogwe ndị a site na mgbidi, uko ụlọ na okpuru nke steepụ. Ọ bụ n'oge a ka anyị matara na sistemụ ịtọgbọ nke ala ugbu a ezughi oke maka mkpa anyị, anyị chepụtara nke anyị.
Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Enwere ọtụtụ ihe ndị a jikọtara ọnụ nke oge a n'ahịa dị na China taa, na-abụkarị dabere na usoro ọdịnala ma site na iji ihe ọhụụ ma ọ bụ ihe ọhụụ. Yuyuyu bụ ụlọ oriri na ọ Chineseụ Chineseụ ndị China, ndị na-emepụta ihe mepụtara ụzọ ọhụrụ iji gosipụta imebe Oriental, ihe nrụpụta ọhụrụ nke edo edo na akara, a na-agbatị ndị ahụ site n'ọnụ ụzọ ruo n'ime ụlọ ebe a na-ere nri. Site ngbanwe nke oge, ekele ndị mmadụ nwere na-agbanwe agbanwe. Maka usoro Eshia nke oge a, imeputa ihe di ezigbo mkpa.
Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Site na ntozu nwayọ nke ihe aesthetics na mgbanwe dị iche iche nke mmadụ, ụdị nke oge a na-egosipụta onwe ya na ịdị iche iche abụrụla ihe dị mkpa maka iji mepụta. Okwu a bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ndị mmebe chọrọ ịmepụta ahụmịhe ohere ntorobịa maka ndị na-azụ ahịa. Osisi na-acha anụnụ anụnụ, isi awọ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-emepụta nkasi obi na oghere nkịtị maka oghere ahụ. Onye chandelier nke ejiri aka aka na igwe mee ihe na-akowa nkukota di n'etiti mmadu na uwa, na egosi otutu ulo oriri ahu.
Ụlọ Ahịa Storeslọ ahịa akwa ndị nwoke na-abụkarị ihe ndị na-anọpụ iche na-emetụtaghị ọnọdụ ndị ọbịa na-emetụta ya ma belata pasent nke ahịa. Iji na-adọta ndị mmadụ ọ bụghị naanị ileta ụlọ ahịa, kamakwa iji zụta ngwaahịa ndị ewepụtara ebe ahụ, oghere ahụ kwesịrị ịgba ume ma nwee ọ spụ. Ọ bụ ya mere ihe eji emepụta ụlọ ahịa a na-eji ihe pụrụ iche mmụọ nsọ site na ịkwa akwa na nkọwa dị iche iche ga-adọta uche ma gbasaa ọnọdụ dị mma. Emekwara oghere a nke kewara n'ime mpaghara abụọ maka ndị ahịa nnwere onwe n'oge ịzụ ahịa.
Kafe Ụlọ Ọrụ Ọrụ Ogwe Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Ụlọ Ahịa